Maktabadda Islaamiga ah ee Maanta waxay kuu balanqaadeysaa inay kuu xifdiso macluumaadkaaga shaqsiga ah ee aad na siisay si aan dalalbkaaga kugu soo gaariino.
Marka aad naga dalbaneyso badeeco waxaan kaaga baahanahay magacaaga, e-mailkaaga, cinwaanka aan dalabkaaga kusoo hagaajineyno & hadii loo baahdo lambarka kaarka-bangiga ee karashka laga bixinayo. (waa hadii aad u isticmaaleyso creditcard bixinta kharashka).
Waxaan kaloo kaaga baahanahay lambarka telfoonkaaga si aan kuula soo xariirno hadii loo baahdo sababo kusoobsan dalabkaaga awgood.
Waxaa kalo ahmiyad noo leh inaan haysano e-mailkaaga si aan kuula soo socodsiino wixii badeeco ah ee cusub ee kusoo kordha bogga ama qiimahooda la jabiyo ama hadii qaabka bogga aan wax ka badalno aniga oo horumarinayna.